Wechip TV Box V8.mp4
problemclean 07 Apr 2019
Wechip W1 air mouse IR learning function guide
problemclean · 88 Views
problemclean · 337 Views
problemclean · 406 Views
WeChip V8 4K 2017 Android 7.1.2 Smart TV Box
problemclean · 46 Views
Ultra thin 4K Android TV Box (V8) (1000 Channel +)
ယခုဈေး - 59,000 kyats
ယခင်ဈေး - 75,000 kyats
Website Link - https://didopc.com/zrAyO
website2Link - https://didopc.com/EmgOC
Video Link - https://didopc.com/dH5tZ
Photo Link - https://didopc.com/rHxkZ
အရမ်းပါးလွာပြီး အသုံးပြုဖို့လဲ အဆင်ပြေတဲ့ သေငယ်တဲ့ Ultra thin 4K Android TV box လေး နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
မြန်မာစာ ပါပါဝင်သည့် အိမ်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Smart TV ဖြစ်ဖြစ် ရိုးရိုး TV ဖြစ်ဖြစ် Computer Monitor ကြီးကြီး တွဲသုံးပြီး Update လုပ်ခြင်ပါသလား ? Android Game ကို TV မှာ ကြည့်ပြီး ကစားခြင်ပါသလား? Online Game ကစားဖို့ မြင်ကွင်းကြီးဒါ အသုံပြုဖို့အရမ်းအဆင်ပြေလှပါတယ် ။
Android ဖုန်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Wirless display ကိုဝယ်စရာမလိုဘဲ ဖုန်းကမြင်ကွင်းကို TV မှာ ပြောင်းလဲကြည့်လို့ရအောင်လဲ Wirless display ပါဝင်ပါသေးတယ် ။
အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် Wirless ပါဝင်သလို iPhone/ipad တွေ android phone /Tablet တွေ အတွက် ချိတ်ဆက်ဖို့ Miracast ပါဝင်ပါသေးတယ် ။ အင်တာနက် ချိတ်ပြီး အသုံးပြုမလား (သို့) Miracast ချိတ်ပြီး Display ပြောင်းပြီး Movie / Facebook / Game တွဲချိတ်အသုံးပြုမလား ရပါတယ်ခင်ဗျာ ။
Ultra thin 4K TV box အတွက် Android OS 7.1 ဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေပြီ Google Play Store ပါဝင်ဒါကြောင့် Game Download ဆွဲပြီး Game play မလား Facebook သုံးမလား အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ USB မှာ Keyboard နဲ့ Mouse တွဲချိတ်ပြီး Android Computer တစ်လု့းလိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက် ကိုယ်စိတ်ကြိုက် လုပ်ခြင်ဒါလုပ်လို့ရသလို Movie ကိုလဲ Direct ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
1000 + Channel တွေလဲ အလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင် Base in Line တွေထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေဒါအမှန်ပါဘဲ
Wirless နဲ့ မချိတ်ခြင်လို့ Network ပေါက်နဲ့ ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ် ။
HDMI ပါဝင်တဲ့အတွက် စိတ်ကြိုက် TV တွေနဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သလို Monitor မှာလဲ ခေါင်းချိန်းသုံးပြုအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ် ။ ကိုယ် အိမ်မှာရှီတဲ့ Desktop ကြီးအတွက် အလုပ်လုပ်လိုက် ရုင်ရှင်ကြည့်လိုက် လုပ်နိင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
CPU အနေနဲ့အမြင့်သုံးထားတဲ့အပြင် ရုပ်ထွက်အနေနဲ့ Ultra HD 4K ဖြစ်တဲ့အတွက် ရုပ်ထွက် ကိုတော့ ပြောမနေတော့ဘူးနော် ။
2TB hardisk (2000GB) နဲ့ Movie ထည့်ထားဒါကို ထိုးကြည့်မယ်ဆိုလဲကြည့်လို့ရပါသေးတယ်။
အားမရသေးဘူးလား မကြာခင် လာမဲ့ Game Pad နဲ့တွဲချိတ်လို့ရသလို Game Pad Control တွေနဲ့လဲ တွဲချိတ်ပြီး fooball ကန်မလား ဘယ်ဂိမ်းကစားမလဲ ကစားလို့ရပါတယ်။
စက်အနေနဲ့ မလေးအောင် 1GB RAM ကိုအသုံးပြုထားပြီး Rom အနေနဲ့ 8GB Rom နဲ့ 8GB Rom ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် ။
နောက်ဆုံးထွက် Moive တွေ Cartoon တွေအစ လွယ်လင့်တကူ ရွေးချယ် ကြည့်နိုင်တဲ့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေဒါအမှန်ပါဘဲ
KODI 17.1 base in ပါဝင်ပြီး Youtube ဖွင်မလား Music ဖွင်မလား အကုန်ပါသလို Radio လှိုင်းအကုန်လဲ ထည့်ပေးထားပြန်တယ် ။
install လုပ်လွန်းလို့ စက်ဟန်းနေမယ်စိတ်ပူနေပါသလား မပါူပါနဲ့ Factory Restart ချဖို့ကအစ အလွယ်ပြုလုပ်လို့ရအောင် ပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ် ။
ဥပမာ Channel myanmar တို့ တခြား Movie ဆိုက်တွေက Pcloud နဲ့ သိမ်းထားဒါတို့ Google Drive နဲ့သိမ်းထားဒါတို့ကို အလွယ်တကူကြည့်ခြင်လဲ Play Store ကနေ Pcloud နဲ့ Google Drive ကို Download ဆွဲပြီး တန်းကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
အားမရလို သူနဲ့တွဲသုံးခြင်တဲ့ Game Control လေးလိုခြင်တယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ပတ်ကစပြီတွဲဝယ်နိုင်ပါတယ် 22000 ကျပ်ပါ ။
Sony လက်မ 40 နဲ့ ယှဉ် မယ်ဆိုတောင် လုပ်ရှားမူ့ က အရမ်း မြန်တဲ့အတွက် အိမ်မှာရှိတဲ့ TV တွေအကုန် Ultra thin 4K TV Box လေးဝယ်ပြီး Upgarde လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်